Maamulka kooxda Mogadishu City Club ayaa Cadeyneynayaan in Shirkada A2Z Sports House ay tahay…
Ramzi Yare	 Jan 27, 2020
Maamulka kooxda Mogadishu City Club waxey Cadeyneynayaan in Shirkada A2Z Sports House ay tahay shirkada rasmiga ee qalabka Naadiga Soo saartay Sanadka 2020-2021 Dhamaan qalabka kala duwan ee naadigu ay ku ciyaareyso sanadkan waxaa soo…
Manchester United ayaa wajihi doonta kooxda AZ Alkmaar kulan ka tirsan Europa League. Labadan koox ayaa xaqiijiyay inay u soo baxeen wareega 16ka laakiin kulankaan ayaa go’aamin doona cida ku soo bixi doonta booska 1aad Group L. Red…
Hordhaca: Astana vs Man United- Ole Gunnar wuxuu fursad siin doonaa da’yarta kulanka caawa
Ramzi Yare	 Nov 28, 2019
Kooxda Manchester United ayaa hore u xaqiiqsatay iney soo gaartay wareega 32-aad ee koobka UEFA Europa League, waxeyna kulanka caawa uga faa’ideyn doontaa da’yarta oo isku muujin doona qabowga ka jira wadanka Kazakhstan. Isbuucyo ka hor…
Maxaa dhacdo ah oo laga diiwaan geliyay kulamada Champions league ee lacayaaray iyo record ah
Ramzi Yare	 Nov 7, 2019
1- Karim benzema ayaa noqday Xidiga 3-aad taariikhda Real Madrid ugu goolahsa badan tartanka champions league labadab gool uu dhaliyay ayaa ka dhigaya goolkiisa 50-aad champions league waxaa ka badan oo kaliya xiddiga Cristiano Ronaldo oo…
Dhamaan Kulamada Champions League Ee Caawa Iyo Saacada Geeska Africa
Ramzi Yare	 Nov 6, 2019
Kulammo ka tirsan heerka guruubyada Champions League ayaa caawa la cayaarayaa kooxaha waa weyn ee dheelayana waxaa ka mid ah Real Madrid, Juventus, Manchester City, Bayern Munich, Tottenham iyo PSG. Real Madrid ayaa soo dhoweynaysa kooxda…
Dhamaan kulammada Caawa la ciyaari doono ee UEFA Europa League
Ramzi Yare	 Oct 24, 2019
Kulammo dhowr ah oo ka tirsan koobka yaraha Yurub ee UEFA Europa League caawa la ciyaari doonaa. Kulammo ka tirsan Guruubyada ayaa la dheeli doonaa caawa, iyadoo ay ku jiraan kulamo xiiso leh. Kooxda Manchester United ayaa kulan ka…
Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo oo Rikoor kale sameeyey kulankii xalay ee…
Ramzi Yare	 Oct 12, 2019
(Yurub) 12 Okt 2019. Cristiano Ronaldo ayaa sameeyey rikoor cusub oo cajiib ah xirfaddiisa ciyaareed ee kubadda cagta, kaddib markii uu gool ka dhaliyey xalay xulka qaranka Luxembourg. Kabtanka xulka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa xalay…
RASMI: Xulkii Ugu Horeeyay Ee U Soo Baxa Koobka Euro 2020 Oo La Xaqiijiyay
Xulka Belgium ayaa noqday xulkii ugu horeeyay ee u soo baxay koobka Euro 2020 iyadoo Romelu Lukaku uu labo gool dhaliyay kulankii ay xalay 9-0 ku xasuuqeen San Marino. Xulka tababare Roberto Martinez ayaa 11 dhibcood ka sareeya xulka…
Manchester United ayaa dib u cosboonaysiin ku samaysay xidigaha uga qayb galayo tartanka Europa…
Ramzi Yare	 Sep 19, 2019
Manchester United ayaa dib u socboonaysiin ku samaysay xidigaha uga qayb galayo tartanka Europa League ee caawa furmi doono, Waana dib looga soo daray Brandon Williams. Goolhayasha:David de Gea, Sergio Romero, Lee Grant & Matej Kovar…
Guud ahaan kulammada caawa la ciyaari doono ee heerka Guruubyada Europa League & Saacadaha ay…
Badrudiin Mohamed	 Sep 19, 2019
Waxaa caawa daaha laga qaadayaa heerka guruubyada Tartanka Europa league, iyadoo ay jiraan kulamo adag oo la ciyaari doono. Kooxaha reer England ee Manchester United iyo Arsenal ayaa ka mid ah kuwa caawa dheeli doona heerka Guruubyada…